TAIGA KALA DUWAN EE CANAB: SHARAX, SAWIR, XULASHO, SIFOOYINKA, BEERASHADA - CANAB
Maanta, waxaa jira noocyo badan oo canab ah oo si isku mid ah loogu habboon yahay isticmaalka cusub iyo winemaking. Si kastaba ha ahaatee, mid kasta oo ka mid ah waxay leedahay sifooyin kala duwan, marka ka hor inta abuuraya beero canab ah waa muhiim in la barto sharaxaadda faahfaahsan ee xulashada la doortay. Maqaalka waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah noocyada canabka ah ee ugu caansan oo loo yaqaan Taiga, waana in la ogaadaa isla markiiba in aysan si gaar ah ugu baahnayn daryeel caafimaad oo si sahlan loo kori karo meel kasta oo guriga ah.
Sharaxaadda canab duurjoogta ah
Dabcan, markaad sharaxayso canab dhan ee wax beerta, waxaad noqon doontaa xiiso badan oo ku saabsan sifooyinka ee xirkooda iyo dhalidda, laakiin si si habboon loo dhigo beeraha canabka ah, waa inaad sidoo kale tixgelisaa shuruudaha duurka naftooda. Sidaa darteed, aan ka fekereyno sharaxaadda qayb kasta oo ka mid ah canabka Taiga.
Kala duwanaanshahani waa mid aad u kala go'ay duurka sare, oo leh kobcin tufaax sanadlaha ah ee 5-7 mitir. On biinka kasta waxaa jira saddex ku dhow, laakiin ka hor in ay jirto nooc dumar ah ubax. Iyada oo ay ku jiraan manjooyin habboon iyo daryeel guud, qiyaastii 100 kg oo canab ah sanadkiiba ayaa laga goyn karaa baadiyaha, inkastoo dad badani aaminsan yihiin.
Burushka taiga taaga ah lama miisaami doono wax ka badan 200-400 g, qaybaheeduna waa labo-centimitir wareegsan oo miro ah, oo qiyaastii 4 g ah. By habka, waxay aad u wacan tahay dhadhanka, inkasta oo yar oo dhanaan (halkan waxaa ku jira 20% oo keliya sonkor).
Ma taqaanaa? Canabtu waxay u noqon doontaa dawo wanaagsan kuwa had iyo goor la kulmaan dhibaatooyin dheefshiidka.
Astaamaha noocyo kala duwan
Doorashada kala duwan ee ku habboon xaalad sii kordhaysa, bannaanka u badan ayaa laga yaabaa inay xiiseynayaan dhalidda ee fursadaha, muddada bislaado ee canab, jilicsan jiilaalka iyo xeerarka daryeelaya geedka canabka ah. Dhamaan kuwan waxaan ka wada hadli doonaa tusaale ahaan Taiga kala duwan.
Fiiri canabka ugu wanaagsan ee gobolada kala duwan: Gobolka Moscow, Siberia, Ural.
100 kg oo dalag ah ayaa laga heli karaa baadiyaha kadib 7-8 sano oo ah beerashadooda., inkasta oo ay si gaar ah u baahan tahay iyo bannaanka u dhegeysta doonaa hubaal ka heli kartaa faro badan oo berry ah. Waxaa sidoo kale mudan in la ogaado in sanadka uusan san u egayn, sidaas darteed ma heli kartid natiijada la rabo wakhti kasta.
Canab ee kala duwan ee this u bislaadaan saddex bilood, taas oo macnaheedu yahay in gobollada leh cimilada dabiiciga ah, waxaa suurtogal ah in ay isticmaalaan miraha macaan ilaa dhamaadka xagaaga. Xaaladaha qaarkood, muddada bislaado waxaa laga yaabaa in si fudud loo rogo dhinac kasta.
Ma taqaanaa? Dadka reer Spain iyo Portugal, waxaa jira hal naadir oo xiiso leh oo la xidhiidha isticmaalka canab: Sannadka Cusub ee New Eve, oo hoos timaadda saacadaha kulul, waa inaad cuntaa 12 canab, oo sameysaan 12 rabitaan. Haddii aad haysato wakhti aad ku sameysid daqiiqadkii ugu danbeeyay ee sanadka soo socda, markaa dhammaantood waxay ku soo baxayaan sannadka cusub.
Inkasta oo shuruudaha shuruudda ah ee beergooyska, uu hayn doono dhammaan tayadiisa, xitaa haddii canab aan waqtigii loogu talagalay. Waxaad si nabdoon uga bixi kartaa burushka meelahooda ka hor intaan barafku dhicin, sida dhirta kala duwan ee noocaas ah ay awoodaan in ay la qabsadaan heerkulka qabow hoos u -32 ° C. Miraha ka tagay xilliga dayrta ma kallifayn doono roobabka dayrta ee macluulsan, taas oo sidoo kale qiimaheeda muujinaysa marka la falanqeynayo mudnaanta dhirta Taiga.
Noocyada canabka ah ee soo socda waxay qabaan adkaysiga jiilaalka wanaagsan: "Halachi", "Krasnostop Zolotovsky", "Xusuusta Dombkovskaya", "Zabava".
Beerto habboon iyo doorasho geedo
Talaabooyinka ugu horreeya iyo kan ugu muhiimsan ee lagu guulaysto canabka sii kordhaya waa xulashada waxyaabo tayo leh oo beerto (geedo) iyo meeleyntooda ku habboon goobtaada. Waxaan fahmi doonaa aqoonta loo baahan yahay halkan.
Dhirta yaryar ee dhirta taiga waxaa lagu beeray goobta iyagoo imaanaya guga, marka labada dhul iyo hawadu ay diirimaad ku filan u helaan badbaadadooda wanaagsan. Tani ma aha waqtiga kaliya ee canabkiisa taranka iyo qaar ka mid ah bannaanka u beeray this canab dayrta.
Waa muhiim! Waxaa suurtagal ah in lagu beero geedo xilliga dayrta oo keliya gobollada halkaas oo kuleyliyeyaashu caadi ahaan ma qaboobaan.
Sida xulashada noocyo kale oo sabiib ah, iibsashada duurka taiga waa muhiim si ay u eegaan xaaladooda, taas oo si toos ah ugu xiran tahay heerka ay ku noolaan karto meel cusub. First of dhan, nidaamka xididka ee baadiyaha u qalmaan aad dareenkaaga. Waa in si fiican loo horumariyo, oo leh tiro ku filan oo laamo ah iyo dhammaadyo nacas ah. Tijaabooyinka habboon, midabada xididada gooyaa waxay noqon doontaa mid cad, laakiin ma aha madow.
Buundooyinka leh ciriiri, qoyan ama xididada dhifka ah waa in la iska indho tiraa, maadaama maadadaasi aysan ku habbooneyn beerashada sii kordheysa mana awoodi doonto inay xidid ka dhigto meel cusub. Ha ku kicin iyo tiro badan oo caleemaha la horumariyey. Qaybaha sare iyo qaybaha hoose ee duurka la soo xulay waa in lagu dheellitiro, taas oo ah, mugga wadarta nidaamka xididka waa inaanu ka yareyn mugga korka cagaaran ee dhulka. Haddii tusaale ahaan aad dooratay waa mid sax ah, ka dibna way u fududaaneysaa inay xidid ku qaataan meel cusub.
Raadinta baadiyaha, fiiri xaaladda caleemaha cagaaran. Looma baahna in wax lagu qoro iyaga, iyo saxanka caleenta laftiisa, baadiyaha wanaagsan, waxay noqon doontaa mid cidhiidhi ah, cagaar cagaaran oo aan lahayn hurdi huruud ah.
Haddii aad ku iibsato geedo leh nooc ka mid ah nidaamka xididka, isku day in aad wali ku siiso dareenka habboon si loo hubiyo in ay xaalad fiican tahay. Si arrintan loo sameeyo, ka saar qaybta jilitaanka dhulka iyo hubi joogitaanka nacfiyada, geeddi-socodka si wanaagsan loo horumariyey ee xididada.
Waa muhiim! Haddii ay suurtagal tahay, isku day in aad ka iibsato duurka Taiga dadka laga xaqiijiyey ama guryaha xanaanada gaarka ah, halkaas oo aad isla markiiba ka heli kartaa talo ku saabsan sifooyinka beeraha sii kordhaya.
Canab kasta, iyo sidoo kale dalagyada kale ee beerta beerta, waxaa lagu beeray sida waafaqsan shuruudaha meelaynta gaarka ah ee aagga loo qoondeeyey. Taageerada Taiga, qaabka la aqbali karo waxay noqon doontaa 3 m bilaash ah oo u dhaxaysa safarka iyo 1.5 m u dhexeeya duurka. Meesha ugu fiican ee la sameeyo waa dhinaca koonfureed ee goobta, kaas oo si fiican u iftiimin doona raajada qorraxda. Xilliga diiran, dhulku waa inuu diiriyaa ilaa iyo inta suurtogalka ah.
Isla markiiba ka dib markii calaamadda aagga, waxaa habboon in lagu rakibo taageerooyinka for geedka canabka ah, kaliya ka dib in ay ku qodo godad. Maskaxda ku hay: Waxaad u baahnaan doontaa inaad qodo wax badan, tan iyo markii ugu horeysay ee dhulka la qodo waa inay ahaataa qiyaas ahaan 1 m oo qoto dheer iyo masaafada isku midka ah ee hoose ee substrate. 20cm ee ugu horreeya ee hoosta waa in lagu daboolaa ciid ama jajab, ka dibna lakabka 10-cm ee jajabyada qoryaha waa in la dhigaa nidaam dheeri ah.
Wax-soosaarka sare waxaa lagu kala soocay noocyada soo-baxa ee soo socda: "Veles", "Isbeddel", "Vodogray", "Lancelot", "Chameleon".
Ka dib markii la sameeyo farsamooyinkaas, waa wax la jecel yahay in lagu wada daboolo filim si markaas lakabka si wanaagsan loo diiriyo. Si aad ciidda ku sii jiri doonto ka dib markaad qodid godka, waa inaad ku dartaa galaas oo ah miro, ash alwaax iyo humus, oo isku dhafan dhammaan qaybaha. Isku darka soo go'ay waa inuu noqdaa mid lebis ah. Ka dib markii substrate soo toostaa hoos qorraxda, waa in dib loogu shubo godka. Iyadoo ay weheliyaan lakabyada hore ee ciidda iyo chips, ciidda waxay sameeyaan tuulo kor u kici doonta heerarka dhulka. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo dalool ah, ku rid seedling ku jira iyo dabooli leh dhulka intiisa kale. Beerto waxay sidan oo kale u noqonaysaa geedo idil oo biyo ah.
Sida loo daryeelo fasalka
Laga soo bilaabo xilliga beerto waxay bilaabmaysaa muddada daryeelka ee "degenayaasha" cusub ee goobtaada, kaas oo bixiya waraabinta wakhtiga ah, bacriminta, manjooyin canab, iyo sidoo kale daaweyntiisa cudurada caadiga ah iyo cayayaanka.
Canab waxaa lagu magacaabi karaa warshad qoyan-jecel, Taiga kala duwan ma aha mid ka reeban arrintaan. Sida noocyo badan oo kale, waxay u baahan tahay waraabinta wakhtiga iyo joogtada ah, gaar ahaan bilaha ugu horreeya ka dib markaad degto goobta. Marka cimiladu tahay qorrax iyo kulayl daaqada ka baxsan, waraabinta waxaa la sameeyaa maalin kasta, iyo roobka cimilada, nasiibka ayay noqonayaan. Haddii ay dhacdo roobab daba dheer iyo qoyaan, waa lagama maarmaan in la waraabiyo beeraha 7dii maalmoodba mar., waana lagama maarmaan in si joogta ah loola socdo dhexdhexaadinta qoyaanka ee ciidda. Mustaqbalka, qiyaastii sannad ka dib beerashada, waraabinta waxaa la qaadayaa wax yar oo ka yar, mararka qaarkoodna roobab dabiici ah ayaa ku filan. Waqtiga ugu fiicnaanta si aad u sameyso nidaamka waa subaxa hore ama fiidkii goor dambe, marka uusan jirin kuleyl aad u kacsan oo banaanka ka baxsan.
Ma jiro wax khaas ah oo ku saabsan taiga canabka ah waxaad u baahan doontaa. Sida noocyo kale, waxay si wanaagsan ugu jawaabtaa waxyaabo macdanta iyo dabiiciga ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhoobo, dhoobo, jeexan iyo compost. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee nafaqada ah ee for vineyards waa digada, sababtoo ah waxaa ku jira dhammaan nafaqooyinka ay raadiyaan xubno muhiim u ah geedka.
Dharka ugu sareeya waxaa badanaa lagu soo rogaa qoto dheer oo qiyaastii ah 40 cm, gaar ahaan qashir xayndaab ah, oo ka baxaya bare ka yar 50 cm. Haddii aad isku dhafatid nafaqooyin leh waraabka canab, ka dibna isticmaalka xajmahan kuwaa waxay ka heli doonaan xididada dhirta iyaga oo muhiim u ah. Canaan quudinta ayaa dhowr jeer sameeyaa xilli:
Guga, sida ugu dhaqsaha badan bacaha dhulka, waxaad isticmaali kartaa isku darka macdanta: tusaale ahaan, 10 litir oo biyo ah oo gil gareeya 20 g superfosphate, 10 g oo amooniyam ah iyo 5 g oo ah cusbo potassium, taas oo ku filan inaad bacrimiso hal baadiyaha. Dhowr usbuuc ka hor intaadan ubaxin "taiga" quudinta.
Ka hor inta Bisaylkiisa ee canab, ciidda waa in la bacrimiyey leh Bacriminta potash iyo superphosphate, laakiin in case this nitrogen mar dambe loo isticmaalo.
Ka dib goosashada, dhirta waxaa la quudin karaa isku dhafka potassium si ay u kordhiyaan hardship jiilaalka.
Waa muhiim! Xilliga guga waxaa la samayn karaa iyadoo la adeegsanayo arrin bakeeriga ah: 1 m² waxaad u baahan tahay inaad qaadato 1 kg oo slurry ah.
Saddexdii sanoba mar, xilliga dayrta, beerta canabka ah waa in la bacrimiyo iyadoo la isku daro digada, superphosphate, ash iyo ammonium sulphate. Waxyaabaha noocan oo kale ah ayaa si siman loo qaybiyey dusha ciidda, ka dib markii la sameeyo qashin qoto dheer oo ah beeritaanka. Haddii dhulka ku yaal beertii canabka ah waxaa jira carrada ugu badan ee ciidda, ka dibna Bacriminta waa in lagu dabaqo qashin sanad ka dib, laakiin meelo ciid ah sanad walba.
Geediga caadiga ah iyo nadaafadda ayaa ah sifooyin muhiim ah ee daryeelka Taiga canab, oo si weyn loo go'aamiyo tayada iyo hodanka ah dalagga. Xaaladdan, nidaamyada noocaas ah waxaa la samayn karaa laba jeer sannadkii: guga iyo dayrta, dabcan, kiis kasta, waxaad u baahan tahay inaad ogaato qaar ka mid ah sifooyinka. Haddii aad rabto in aad jarjartid xilliga dayrta, waxaad go aansatid naftaada waxa aad rabto in aad aragto guga, maxaa yeelay habka habsocodka loo fulin doono waxay ku xiran tahay. Iyada oo ay ku jirto beerashada canabka ah ee sabirta iyo waayo-aragnimada badan ee daryeelidda iyaga oo aan dhibaato lahayn.
Si kastaba ha ahaatee, haddii ay jirto sabab kasta oo taiga ay ku jirto gobolka laga tago ama manjooyin si aan habooneyn, ka dibna waxay qaadaneysaa waqti dheer si looga shaqeeyo baadiyahaas oo kale. Caleemaha yaryar iyo kuwa cagaaran ee ka muuqda laanta geedka waa in si joogto ah loo nadiifiyaa: laga bilaabo guga ilaa dayrta. Nidaamkan waxaa la sameeyaa sanad walba, isagoo fiirinaya baadiyaha kasta.
Waa muhiim! Haddii ay jiraan dhowr laamood oo duurka ah, ka dibna laba ka mid ah kuwa ugu caafimaad leh ayaa laga soo xushay, iyaga intiisa kale waa in laga saaraa xilliga dayrta (ka dib marka caleemaha ay ku dhacaan canab). On caleemaha si fiican loo horumariyey, kuwaas oo ku haboon yahay formation of link miro, laamaha iyo geedka canabka ah ayaa tagay sanadka soo socda.
Dhammaan falalka kor ku xusan, waxaad u baahan tahay inaad doorato wax aan ka badnayn saddex laan oo gacanta ku leh. Si ka duwan gooyo xilliga dayrta, sameynta nidaamkan xilliga gu'ga ayaa kaa qaadi doona tamar badan. Shaqada waxaa la sameeyaa bisha koowaad ee kulul, sida ugu dhakhsaha badan ee dhaxan dib u soo kabashada. Dhammaan gacmaha iyo laanta la gooyey ayaa laga saaraa dhirta, halkii ay ka baxaan oo kaliya ku habboon fruiting. Waa in la sheegaa in marka la eego noocyada kala duwan ee Taiga, oo aan u baahnayn hoyga jiilaalka, waxay noqon doontaa mid caqli gal ah in la fuliyo manjooyin guga, taniyo "wareejinta" warshad khafiif ah ayaa si fudud u qaboojin kara.
Cudurada iyo cayayaanka canabka taiga
Marka aad dooranaysid noocyada Taiga ee loogu talagalay tarankaaga, waa inaad ogaataa in uu yahay geedka aadka u xoogan, wax yar u nugul cudurada iyo weerarada cayayaanka. Dhibaatada ugu weyn ee kiiskan waa caarad, saameeyeen canjeerada sanadka koowaad ee kobcintooda. Kani waa cudur caadi ah oo uu sababo fungus. Dhanka kale, waxaa lagu muujiyaa muuqaalka dhibco huruud ah, inkasta oo kiisaska leh noocyada kala duwan ee la tilmaamay ay yar yihiin, caleemuhuna waxay soo gashaa qalabka casriga ah.
Baro hababka ka hortagga iyo daaweynta anthracnose, xayrta budada ah iyo chlorosis of canab.
Dhibcaha ku saabsan berry waxay horseedi karaan xaqiiqda ah in guntu si degdeg ah u madoobaado oo u dhaco, sidaas daraadeed sannadka ugu horreeya ka dib marka la beero, waa in la ilaaliyo dhaqanka iyadoo loo marayo daaweyn qaas ah oo leh daaweyn khaas ah ama daaweyn.
Baro sida loola macaamilo roodhida, boodada iyo gaashaan canab.
Taiga canabkuna waa weyn yahay samaynta casiir ama khamri, caleemahana qaro weyn ayay ka soo baxaysaa qorraxda qorraxda. Haddii aan ku darno soosaarkan sarreeya iyo dalabaadka hooseeya ee daryeelka, ka dibna waxay noqonaysaa mid cad sababta beeraha oo dheeraad ah oo dheeraad ah door bidaan warshad gaar ah.